Ny fandefasana ny iPhone 13 dia mahatratra ny daty fandefasana eo anelanelan'ny 19 sy 26 Oktobra | Vaovao IPhone
Rehefa akaiky hanatratra ny herinandro isika hatramin'ny nanolorana ny maodely mini iPhone 13, iPhone 13 Pro ary iPhone 13 vaovao ny tahiry amin'ireo dia manohy miala amin'ny fandefasana entana haingana, fa ny mifanohitra amin'izay no izy.
Ao amin'ny tranokala Apple dia hitantsika fa ireo maodely nangatahina indrindra toy ny mahazatra dia ireo fampiasa. Ireo maodely izay ampidirina amin'ity indray mitoraka ity dia manampy ny 128 GB fitehirizana anatiny ary amin'ny tranga sasany dia azo angonina ao amin'ny magazay ny ampitso aorian'izay dia horaisin'ny mpampiasa an'arivony erak'izao tontolo izao, amin'ny 25 septambra.
Fanaterana an-trano eo anelanelan'ny 19 sy 26 Oktobra
Ny mahatonga ny ankamaroan'ny iPhone 13 misy ankehitriny dia ny fandefasana mandalo eo anelanelan'ny 19 sy 26 Oktobra. Amin'io lafiny io dia tsy zava-poana amin'ny fahitana ireo fotoana fandefasana entana ireo raha jerena ny toe-java-misy ankehitriny, saingy tsy maintsy milaza isika fa ny fahatsapana voalohany dia ny fananana tahiry amin'ny herinandro manaraka ... Toa izany tsy izany ary ireo mpampiasa izay mividy izao dia tsy maintsy miandry ela kokoa na fidirana mivantana amin'izy ireo amin'ny safidy pickup fivarotana, amin'ny fotoana voatendry foana.
Toy ny amin'ny fandefasana Apple hafa, amin'ny voalohany dia avo ny fangatahana ary raha tsy mailaka isika rehefa napetrak'izy ireo am-barotra, dia mila miandry ela isika vao hahazo ny fitaovantsika. Amin'ity tranga ity, ny fandefasana dia mety hiharan'ny fanovana daty aorian'ny andro fanokafana ofisialy izay ny zoma 24 septambra ho avy izao.
Ny fahombiazan'ny maodely iPhone 13 vaovao dia azo antoka ary na dia tsy mampiseho tarehimarika fivarotana ofisialy aza i Apple mandritra ny fihaonany amin'ireo tompon-trano, azo antoka fa ny orinasa mpandalina sasany dia manisa ny fandefasana entana ary afaka mametraka isa amina telefaona amidy izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Ny fandefasana ny iPhone 13 dia mahatratra ny daty fandefasana eo anelanelan'ny 19 sy 26 Oktobra